ဝါးခယ်မမြို့နယ်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ မျက်နှာစုံညီစည်းဝေးနှင့် ပြန်လည်ရွေးချယ် ဖွဲ့စည်းရေး ကျင်းပပြုလုပ် – ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
အခမ်းအနားသို့ ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဦးဝင်းကိုကို၊ ဒေါက်တာ ဌေးနိုင် နှင့် ခရိုင်ပါတီကော် မတီဝင်များ၊ မြို့နယ်ပါတီကော်မတီဝင်များ၊ အရံပါတီကော်မတီ ဝင်များ၊ ရပ်ကွက်ကျေးရွာများမှ ပါတီခေါင်းဆောင်၊ ဒုခေါင်းဆောင်များ စုစုပေါင်း (၁၈၅) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
၀ါးခယ်မမြို့နယ် ပါတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးကျော်လွင်၊ မြို့နယ်အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ဦးဇော်နိုင်သန်း နှင့် မြို့နယ်ပါတီကော်မတီဝင်များအဖြစ် ဦးကိုကိုဦး၊ ဦးကျော်စိုး၊ ဦးမောင်မောင်သန်း၊ ဒေါ်အေးအေးနွယ်၊ ဒေါ်လဲ့လဲ့ထွေး၊ ဒေါ်လွင်လွင်အောင်၊ ဦးတင်ထွဋ်၊ ဦးမြအောင်၊ ဦးညီညီအောင်၊ ဦးဝင်းနိုင်၊ ဦးမြင့်ဦး၊ ဦးကျော်ကျော်ဌေး၊ ဦးကျော်ထွန်းဦး တို့အား အတည်ပြုရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
← ပြည်မြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ မျက်နှာစုံညီစည်းဝေးကျင်းပ
သံတွဲပြည်ခိုင်ဖြိုး အမကကျောင်းများသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းမှုပြု →
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းဌေး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
July 13, 2018 USDP 2016 Comments Off on ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းဌေး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
September 5, 2018 USDP 2016 Comments Off on နတ်မောက်မြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဝါတွင်းကာလဥပုသ်နေ့တိုင်း ဓမ္မစကြာရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲကျင်းပ